के हो वास्तविकताः ‘कम्फोर्टेबल सरकार’बारे के भनेका थिए त प्रचण्डले ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । प्राइम टाइम टेलिभिजनमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तर्वार्ता दिँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक हुँदा देशभित्र समेत सन्तुलन र छिमेकीहरुसँग पनि सम्बन्ध सुधार हुनेमा जोड दिँदै नेकपा, जसपा र नेपाली कांग्रेसको सरकार सबैभन्दा बढी कम्फोर्टेबल हुने बताए ।
तर उनले भनेको यही कुरालाई बंग्याएर केपी पक्षले उनको आलोचना गरिरहेको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सरकार गठनलगायतका विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्तालाई तोडमरोड गरेर उनको आलोचना गरिएको हो ।
के भनेका थिए त प्रचण्डले ?
अन्तर्वार्तामा ऋषि धमलाले सोधेका थिएः त्यसो भए संयुक्त सरकार बन्छ ? तीन पार्टी एक भएर जान्छ भन्नेमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
प्रचण्डले भनेका छनः
मलाई के लाग्छ भने हिजो गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा यो असम्भव हो भन्ने केपी ओली । माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक ढंगले ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर माधव नेपालले पठाएर वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पा जानुभयो । म र बाबुराम थियौं । पहिलोपटक माइन्यूट गरियो, अब हामी मिलेर जाने भनियो । त्यो भन्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ, आतंककारीसँग यसो गर्ने भन्ने केपी ओली । कुरा बुझ्नुभयो ? समानुपातिक समावेशी हुनुहुँदैन भन्ने केपी ओली ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्डको सचिवालयका १ चालकलाई कोरोना पुष्टि
हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनको नेता त माधवकुमार नेपाल हो नि त । महासचिव त वहाँ थियो नि त आन्दोलनभरि । भने हामी सप्पै त यहीं छौं । माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ । हामी सँगै छौं । शेर बहादुर जी पनि नेपाली कांग्रेसको नेता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साहस नगरेको भए, पहल नलिएको भए शान्ति सम्झौता हुन गा¥हो थियो । सात दलको नेताको हैसियतले वहाँले भूमिका खेल्नुभयो । शान्ति सम्झौतामा दुइटाले हस्ताक्षर गर्यौं । त्यो सबै शक्ति त हामी एकै ठाउँमा छौं नि ।
याे पनि पढ्नुस लचिलो बन्दै ओली, एक पद छोडने मनस्थितिमा !
यी सबै शक्ति मिल्नुपर्यो भन्या हो । यहाँ कोही कसैका विरुद्ध षडयन्त्र होइन यो । ती शक्ति मिल्दा नै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बन्ने भयो । र, इतिहासले जसलाई अगाडि बढ भन्यो, तिनै बढनुपर्यो । नबढ भन्या मान्छेलाई कताकताबाट ल्याइयो र त यहाँ दुख पाइयो ।
त्यसो भएर मेरो भनाई नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ देशको राजनीति । सन्तुलनमा बस्छ । सबै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ । भारतसँग पनि, चीनसँग पनि राम्रो सन्तुलन हुन्छ । अझ भारतसँगको हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध छ, हाम्रो इतिहास र भूगोल, संस्कृति, धर्म, परम्परा, अर्थतन्त्र, पानीढलो, खुला बोर्डर । सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाईकन पनि नेपालमा स्थायीत्व विकास त हुँदैन । त्यसैले म के देख्छु, नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि यो भन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन, चीनका लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ । अनि यति राम्रो सम्भावना अहिले छ, यो सम्भावना जानुपर्यो भनेर मैले भनेको छु । आत्मसमिक्षासहित भनेको छु फेरी । अर्को तरिकाले हुन्छ कि भनेको त्यो भएन पनि भनेको छु । मलाई पुस्तकको खुला पाना बुझिदिए हुन्छ । म खुला छु र यो नै सबैको हितमा छ भन्ने मलाई लाग्छ ।